David Goodis. 3 firimu kuchinjika kwenhau dzake | Zvazvino Zvinyorwa
David goodis ndomumwe wevanyori ivavo damn, yehupenyu hwakaoma uye yakapera nguva isati yakwana. Akazvarwa zuva rakafanana nhasi muPhiladelphia muna 1917, asi akafa aine makore makumi mashanu muchipatara chepfungwa. Iye anga ari iye munyori wezve makumi maviri enoverengero ekufona pulp, asi akasainawo vamwe vevamiriri vevatema mhando senge Pfura muridzi wepiano, Nzira yerima o Panguva yemanheru. Nhasi, mukurangarira kwake, Ini ndinoongorora iwo matatu mazita izvo zvakatorwa kumabhaisikopo nekubudirira kukuru.
1 Pfura muridzi wepiano
2 Panguva yemanheru
3 Nzira yerima
Pfura muridzi wepiano
Vanoti ndiyo hunyanzvi yaGoodis uye izvo hazvikweguri uye zvirokwazvo zvinoramba zvichingova imwe yenyaya dzinoshamisa kwazvo dzerudzi rwemarudzi. Yaive iri 1960 apo French director Francois Truffaut akaenda naye kumabhaisikopo ne Charles Aznavour semunhu mukuru.
Iyo nyaya inotanga mune yakakwenenzverwa bar mukati Filadelfia, panosvika murume padivi pake uye ari kutiza. Tsvaga Eddie, the Pianist, anovawo mukoma wake. Haana kumuona kwemakore mazhinji uye anokumbira rubatsiro uye pekugara. Asi Eddie haana chaanoda kuziva nekuti haadi nhamo.
Vanobva vaoneka varume vaviri vane pfuti uye Eddie haagoni kubatsira asi kubatsira hama yake kutiza. Asi naiyewo anofanira kutiza Uye achazviita naLena, mushamwarikadzi asinganzwisisike uye iye ega munhu anoziva iye kuzivikanwa chaiko. Ari Edward Webster Lynn, mutambi anozivikanwa wekonzati piano iyo makore apfuura yaive yakabudirira kwazvo. Mubvunzo ndewokuti, sei akazoguma arara mumarara iwayo uye ndiye gehena-yakatsunga kudzima chero chiratidzo chekare.
Iri zita raivewo ne kugona kupenya kumafirimu ne Jacques mushanyi, director weFrance mavambo aiziva kuita mumarudzi ese emhando asi akasaina yake anoshanda zvakanyanya mufirimu noir mukupera kwema40 nema50.
Kune iyi nyaya Tourneur akachengetedza zvinyorwa zvekufungidzira uye hunyengeri nekuwedzera a zvine mutsindo mutinhimira uye yake yekuona maitiro, akasimbiswa nekushandisa kwakakwana kwe flashback.
Mariri, uye pakutanga, tinosangana ne protagonist, James achinyarara (a Aldo ray aine poindi yekuoma uye tsitsi zvakamuratidzira). Vanning mugadziri isu tinoziva chete kuti anoita kunge ari kutiza kubva kune chimwe chinhu. Muchitoro chekofi sangana nemukadzi, Marie gardner, modhi inoridzwa na Anne Bancroft, iyo inoitawo kunge iri padambudziko. Ukama hunobuda pakati pavo hunozopedzisira hwavabatsira ivo vaviri.
Ndipo apo, neakasiyana kupenga, tiri kudzidza nyaya yacho. Saka tinoziva kuti parwendo rwemumunda kuenda kundoredza Vanning neshamwari yake Edward Gurston vanogumburwa nechikwata chemakororo uyo akangobira bhanga. Ivo vanoponda Edward uye vanosiya Vanning kuti vakafa. Zvisinei, Vanning mupenyu pamwe tsvaga mari zvekuba. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, iye achatambura kwenguva yakareba kutambudzwa na makororo uye zvakare ye zviremera, iyo yavanonongedzera sekutanga kufungira yekufa kwaEdward.
Vincent Perry (Humphrey Bogart), akatongerwa zvisiri izvo kugara mutirongo kweupenyu kwe kuuraya mukadzi wake, anotiza mutirongo kuratidza kuti haana mhosva. Anosangana ne anokwezva mutorwa kuti iye achamubatsira nekuti baba vake vaivewo nyajambwa wekukanganisa kwekutonga.
Saka isu tine yakasarudzika kukura kwefirimu noir uko protagonist inofanirwa achitiza mapurisa achiedza kutsvaga kuti ndiani auraya mukadzi wake asati asungwa zvakare. Uye pakati pevanojairwa vatema uye vakadzi vanouraya, zvakare zvekare echinyakare.
Iyo bhaisikopo yakasaina Delmer Daves, munyori wechiratidziro uyo akatanga kutungamira uye nyanzvi mu kumadokero Chemhondoro Chitima che3:10 o Muti wakarembera. Zvisinei, zvave zvakadaro akura zvakanyanya kupfuura akawanda echinyakare aakatamba nawo mukati Bogart, pamwe nekuda kwechinyorwa chine zviwande zvinoteedzana asi zvichibva pane zvakaoma-kudavira zvinoitika.
Asi zvichiri kukosha kuona nekuti ndezve iyo chetatu bhaisikopo rechina rakapfura pamwechete Bogart y Lauren Bacall. Uye zvinoratidza kuti zvakagadzirwa zvakajeka kuti ivo vazadze makamuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » David Goodis. 3 firimu kuchinjika kwemanovel ake